သံရုံးများအပြန်အလှန် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် အီရန် နှင့် ဆော်ဒီအာရေးဗျ နိုင်ငံတို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီဟု အီရန်ဥပဒေပြု အမတ်ပြော - Xinhua News Agency
အီရန်နိုင်ငံ တီဟီရန်မြို့၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က ကျင်းပသော ၁၉၇၉ ခုနှစ် အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် အီရန် အလံအား ဝှေ့ယမ်းနေသော ကလေးငယ်တစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တီဟီရန် ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အီရန်နိုင်ငံ နှင့် ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံတို့သည် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပြန်လည် တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်လုပ်ဆောင်နေပြီး ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာသံရုံးများကို တီဟီရန်မြို့တော် နှင့် ရီယာဒ့်မြို့တော်တို့တွင် အပြန်အလှန် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အီရန်နိုင်ငံ ဥပဒေပြုအမတ်တစ်ဦးက ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံ al-Khubar တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်က ဆော်ဒီအလံကိုင်မြှောက်ထားသော ကလေးငယ်တစ်ဦးအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အီရန်နိုင်ငံပါလီမန်လွှတ်တော်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ နှင့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Jalil Rahimi Jahan-Abadi က ပါရှန်ဘာသာစကားဖြင့် တွစ်တာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်၌ ပိုစ့်တစ်ခုရေးသားဖော်ပြခဲ့ရာတွင် အဆိုပါ သံရုံးများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် လုပ်ဆောင်မှုသည် ဒေသတွင်းတင်းမာမှုများ လျှော့ချရန် နှင့် မွတ်စလင်နိုင်ငံများအကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို တွန်းအားပေးရန် အလွန်အရေးပါသော သက်ရောက်မှုများရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အစောပိုင်းတွင် အယ်လ်ဂျာဇီးသတင်းဌာန၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအစီအစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခု၌ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hossein Amir Abdollahian က အီရန်နိုင်ငံသည် ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအရာရှိများနှင့်အတူ အီရတ်နိုင်ငံ၌ အပြုသဘောဆောင်ပြီး အပေါင်းရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့သည့် ဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်း လေးကြိမ်ထိ ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်။
“ ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံဘက်က စိတ်ဆန္ဒတွေရှိမယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်မဆို နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးတွေ ပုံမှန်အနေအထားပြန်ရောက်ဖို့ လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တရားဝင်ရပ်တည်ချက်ကို ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ၊ သံရုံးတွေနဲ့ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတွေ ပြန်ဖွင့်မယ့်ကိစ္စရပ်အပေါ် အီရန်နိုင်ငံဘက် ကြိုဆိုသလို အသင့်ရှိနေပါတယ်” ဟု Abdollahian က ဆိုသည်။
အီရန်နိုင်ငံ နှင့် ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံတို့သည် နှစ်နိုင်ငံအကြား တင်းမာမှုများကို လျှော့ချရန်အတွက် အီရတ်နိုင်ငံ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေ ၁၀ ရက်တွင် အတည်ပြုပြောကြာခဲ့သည်။ (Xinhua)
TEHRAN, Jan. 15 (Xinhua) — An Iranian lawmaker said on Saturday that Tehran and Riyadh are reviving their relations and preparing the ground for the reopening of their embassies.
Jalil Rahimi Jahan-Abadi,amember of the Iranian Parliament’s National Security and Foreign Policy Committee, made the remarks inaTwitter post in Persian, adding the move will have important impacts on reducing regional tensions and fostering solidarity among Muslim states.
Earlier, in an interview with Al Jazeera English-language news channel, Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian said Iran has so far held four rounds of positive and constructive talks with the relevant Saudi officials in Iraq.
“What we have stated as our official position is that relations between the two countries would return to normal whenever the Saudi side wishes. Iran is ready and welcomes the reopening of the embassies and consulates,” Abdollahian said.
Photo (1) A girl holdsanational flag of Iran duringaceremony marking the anniversary of the victory of the Islamic Revolution in 1979 in the suburb of Tehran, Iran, on Feb. 1, 2020. (Photo by Ahmad Halabisaz/Xinhua)
Photo (2) A girl holdsanational flag during celebrations in al-Khubar, Saudi Arabia, Sept. 23, 2013. (Xinhua)